I-Volumetric flask: iyini, yenzelwe ini futhi iyathayipha | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lapho sise-laboratory sisebenzisa izinsimbi ezithile ezisisiza ukwenza izilinganiso nokuhlola. Enye yezinsimbi ezisetshenziswa kakhulu ezimele impumelelo enkulu emhlabeni yamakhemikhali ne-physics yi isigaxa volumetric. Kuyithuluzi eliwusizo kakhulu ekuthuthukisweni nasekutholakaleni kwezifundo eziningi zesayensi. Ngoba kusiza ukubala ngokunembile inani leziphuzo ezingalinganiswa, isibe ngelinye lamathuluzi asetshenziswa kakhulu.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, ukubaluleka nokuthi ibhodlela le-volumetric lisetshenziswa kanjani.
1 Iyini iflaskum volric
2 Yenzelwe ini
3 Ukusetshenziswa kwebhokisi lomthamo
4 Izinhlobo zebhokisi lomthamo
Iyini iflaskum volric
Yaziwa nangokuthi igama likaFiola futhi ayilutho ngaphandle kwesitsha sengilazi esisetshenziswa kumalabhorethri. Ngenxa yaleli thuluzi, izilinganiso eziqondile zamazinga ketshezi zingatholakala futhi zisetshenziselwa ukuxuba izinto ezizosetshenziswa kamuva. Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi yenziwa ngengilazi futhi inentamo ende futhi encanyana. Iphansi lalo liyisicaba ngokuphelele. Entanyeni kunophawu olwaziwa nge-gauging, yingakho igama layo. Umthamo unesibopho sokukhombisa ivolumu yoketshezi okumele ibhodlela le-volumetric liqukethe ukuze kuqinisekiswe futhi kwenziwe lula isilinganiso ngqo. Ngale ndlela, izilinganiso ezifanayo kakhulu zitholakala nge-margin encane yephutha.
Ukumakwa kwentamo kuqala kusukela kusisekelo esime njengepheya futhi kugijime ngaphesheya kwentamo emincane. Ngale ndlela, kungenzeka ukuthi unikeze izinhlobo ezahlukahlukene zokukalwa kwevolumu.
Ibhodlela levolumetric lisetshenziselwa ukukala ngokunembile imiqulu ehlukene yeziphuzo ezitholakala elabhorethri. Zingasetshenziselwa ukwenza amamiksi wezinto ezahlukahlukene futhi zithole ukwakheka ngaphandle kokulayisha ngokweqile umsebenzi wazo. Hlala ukhumbula lokho amabhodlela amaningi asetshenziselwa ama-laboratories esikole kuphela. Lawa mabhodlela athambekele ekubeni nezici ezithile eziyisisekelo futhi abucayi. Kodwa-ke, kumalabhorethri asemthethweni kunezinye izinhlobo zamabhodlela athe xaxa anezingoma ezahlukahlukene futhi asekela umthamo omkhulu.
Into ebaluleke kakhulu ngaphambi kokuthenga iflask volumetric ukwazi ukuthi izosetshenziselwa ini. Ngale ndlela, siyakwazi ukukhetha imodeli efaneleke kakhulu ngokuya ngokusetshenziswa okuzonikezwa kona. Umsebenzi ulula. Kuyadingeka kuphela ukwazi ukuthi imiphi imikhiqizo edingekayo ukuze kutholakale isilinganiso esifanele. Lesi silinganiso singaba sevolumu yoketshezi noma ingxube yazo. Umsebenzi oyinhloko webhokisi lomthamo ukukala ivolumu yetshezi elisetshenziswa yilabhorethri. Ingasetshenziselwa noma yiluphi uhlobo lokuhlola noma lokuhlola.
Isinyathelo esibaluleke kunazo zonke okufanele usazi lapho usebenzisa iflask volumetric ukwenza umaki. Ukwakha ukugcwalisa iflaskum volric ngendlela efanele. Ukwenza lokhu, kungcono ukusebenzisa ifaneli ngoba inenani eliphakeme elidlulisiwe. Ukuba isiqongo esintekenteke nesihlangene, kulula ukubeka uketshezi ngaphakathi kwebhokisi lomthamo. Ngenxa yalokhu, sithola ukucacisa okungcono ngoba sengozini encane yokuchitheka. Futhi kuzosisiza ukuthi sibe nesilinganiso esinembe kakhudlwana nenduduzo enkulu enqubweni.
Elinye iphuzu okufanele silinakekele lapho sisebenzisa ibhodlela le-volumetric yisikhathi lapho kufanele senze khona isilinganiso. Kufanele ugxile ephuzwini elimaphakathi lejika elifinyelela isisombululo. Kumele sinake ukuthi amabhodlela amaningi anamaphethelo aphezulu kanti amanye anemiphetho ephansi. Kunoma ikuphi, into ebalulekile ukuthi kufanele ngaso sonke isikhathi sigcine amandla. Le ukuphela kwendlela yokukwazi ukulawula kahle iphuzu lesikhungo sejika lesisombululo. Kumele sibheke umthamo njengolayini oqondile ukuze sikwazi ukuqinisekisa ukubalwa okunembile kuketshezi. Akunakubonwa njengesiyingi noma ngeke sibe nomphumela esiwulindele.
Ukusetshenziswa kwebhokisi lomthamo
Ayisetshenziselwa kuphela ukukala ivolumu yoketshezi, kodwa futhi nokwenza izingxube ezahlukahlukene. Sizohlukanisa ukusetshenziswa okuhlukile kwebhokisi lomthamo:
Linganisa ivolumu yeziphuzo: Qaphela amamaki asentanyeni yeflask njengesiqondiso. Ngenxa yabo, singalinganisa ivolumu yetshezi ngokubheka ijika phezulu noma phezulu.
Lungisa izixazululo: Lolu hlobo lwe-flask lusebenza nokulungisa izixazululo. Uma sazi inani le-solute ne-solvent, singaxuba inani esilidingayo. Isisindo se-solute sinqunywa ngebhalansi. Isitobhu bese sibekwa ebhodleleni levolumetric bese liyanyakaziswa kuze kube yilapho zonke izingxenye zihlanganisiwe ngaphandle kokubeka engcupheni yokuchitheka kwesixazululo.
Izinhlobo zebhokisi lomthamo
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zebhokisi lomthamo ngokusho kwezinye izici. Ake sihlaziye ukuthi ziyini:
Ngokusho kokunemba: Sinemiphongolo evolumu yohlobo A esetshenziselwa ukukala uketshezi nokulungisa izingxube ezahlukahlukene. Zisetshenziswa kumalabhorathri we-chemistry athuthukile. Amafutha omthamo wohlobo lwe-B yilawo atholakala kumalabhorethri esikole anezidingo eziphansi.
Ngokuya ngomthamo wevolumu: Uma kukhulunywa ngomthamo wevolumu ye-volumetric flask, asibhekiseli kumabhodlela e-1 ne-2 ml, yize lawo asukela ku-25 ml kuye ku-500 ml avame ukusetshenziswa.
Ngokusho kombala: ngokuya ngokuthi iyiphi le nto ekwenze wakwazi ukuthola imibala ehlukile. Abanye banombala odingekayo ukuze bakwazi ukucubungula izingxube ezizwela ukukhanya. Khumbula ukuthi kumele babe nenhlanzeko enhle yanoma iluphi uhlobo lwesilinganiso. Uma ungenayo inhlanzeko enhle, izilinganiso zingathinteka futhi ziguqulwe.
Njengoba ukwazi ukubona, ibhodlela levolumetric lingenye yamathuluzi asetshenziswa kakhulu emhlabeni wamakhemikhali ne-physics kanye namalabhorethri. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngebhodlela le-volumetric nezimpawu zalo eziphambili.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Isigaxa sevolumu